သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> သားရေအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို -> သားရေအပ်ချုပ်စ​​က်အပ်နဖားကို
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan သားရေအပ်ချုပ်စ​​က်အပ်နဖားကို ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
Equivalent Systems: 1738; 287WH, 16X257, 16X231, 16X95, SY2254
စက် flatbed တစ်ခုတည်းအပ်နဖားကိုအဘို့, သာမန်ပိတ်ထည်သို့မဟုတ်သားရေချုပ်များအတွက်သင့်လျော်မယ့်, Size ကို # to14 # to18 11 #, စတာတွေ, လက်အိတ်တက်ချုပ်, ကင်မရာအမှုများ, leatherette, ကစားစရာအရုပ်, ဖိနပ်, ခေါင်းအုံးနှင့်ကစားစရာအရုပ်ဖိနပ်ကိုများအတွက်သင့်လျော်သည် Size ကို9#, နှစ်ချက်အပ်နဖားကို zigzag စလွယ်ကိုဆွဲချုပ်စ​​က်သို့မဟုတ် Pin-point ကောင်း၏ (အိပ်ရာ -lack) စက်နှင့်သားသမီးများရဲ့ကျီနှင့်လက်အိတ်တန်ဆာဆင်အပ်ဘောင်းဘီချုပ်များအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။ 24 # အရွယ်အစား 19 #, ultra မိုးသည်းထန်စွာသားရေချုပ်အဘို့အသင့်လျော်သည်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 1738; 287WH, 16X257, 16X231,
16X95, SY2254 ။
Equivalent Systems: 287WHLR, 1738LR, 16X230 NRTW
lockstitch စက်နှင့် Flatbed စက်, အသေးစား Shanks, (သားရေအတွက်) လှည့်ကွက်ဖြတ်တောက်ခြင်းပွိုင့်နောက်ပြန်လှည့်အဘို့, အပ်ချုပ်ပညာသားရေသို့မဟုတ် leatherette ကုန်ပစ္စည်းများ, သားရေလက်အိတ်နဲ့ camera ဖြစ်ရပ်များသင့်လျော်သည်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 287WHLR, 1738LR, 16X230 NRTW ။
Equivalent Systems: 1738S
flatbed သို့မဟုတ်သားရေအသုံးပြုမှုစက်အငယ်အဘို့အ Shanks, (သားရေအတွက်) လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖြတ်တောက်ခြင်းပွိုင့်အပ်ချုပ်လက်အိတ်, ကင်မရာအမှုများနှင့် leatherette ကုန်စည်များအတွက်သင့်လျော်သည်, etc.Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 1738S ။